Dataset များ - OD Mekong Datahub
မြန်မာ (389) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (153) ထိုင််း (153) ဗီယက်နမ် (153) ကမ္ဘောဒီးယား (152) တရုတ် (58) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (23) အင်ဒိုနီးရှား (23) မလေးရှား (23) ဖိလစ်ပိုင် (22) စင်္ကာပူ (22) တီမော လက်စ်တေ (17) အိနိ္ဒယ (15) မွန်ဂိုးလီးယား (15) ဟောင်ကောင် (14) ဂျပန် (14) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (14) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (14) သီရိလင်္ကာ (14) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (12) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (12) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (4) ဘူတန် (4) နီပေါ (4) အာဖဂန်နစ္စတန် (3) ဩစတေးလျ (3) ကွတ်ကျွန်း (3) မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖ... (3) အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ... (3) ကီဂျစ်စတန် (3) ကီရီဘာတီ (3) ကာဇက်စ်တန် (3) မာရှယ်ကျွန်း (3) မေ်ာလ်ဒိဗိ (3) နယူးဇီလန် (3) ပါကစ္စတန် (3) ပလော (3) တာဂျစ်စတန် (3) တာဂမန်နစ်စတန် (3) ထွန်းဂ (3) အူဘက်ကစ်စတန် (3) ဆာမိုအာ (3) အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမ... (2) ဂူအန် (2) ဟာဒ်ကျွန်းနှင့် အမ်... (2) မကာအို (2) မြောက်မာရီယားနား (2) နော်ဖော့ခ် ကျွန်း (2) နော််ရူး (2) နိယူအဲ (2)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (377) ဗမာဘာသာစကား (155) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (3) ခမာဘာသာစကား (1) လာအို (1) ထိုင်း (1)
ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (132) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (39) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (24) အစိုးရ (21) စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်... (21) ရေအရင်းအမြစ်များ (21) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှ... (17) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်... (16) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (16) ရွေးကောက်ပွဲများ (14) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင... (14) စွမ်းအင် (14) လူဦးရေ (14) စိုက်ပျိုးရေး (13) လမ်း၊ တံတားများ (13) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (11) သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံး... (11) သစ်တောများ နှင့် သစ... (11) Sustainable develop... (11) ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာ... (10) မြေအောက်သယံဇာတ ထုတ်... (10) မြေယာ (10) ကုန်သွယ်ရေး (10) ပညာသင်ကြားနိုင်မှု (9) ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင... (9) အခြေခံအဆောက်အဦများ (9) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (9) အုပ်ချုပ်ရေး (8) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (8) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (8) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (8) လွှတ်တော် (8) မူလတန်းနှင့် အလယ်တန... (8) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိ... (8) သတင်းအချက်အလက်များ ... (7) ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်င... (7) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (7) လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆ... (6) သစ်တောအမျိုးအစားများ (6) ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်း... (6) ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအ... (6) အလုပ်သမား (6) ကပ်ရောဂါ (6) SDG 15 Life on land (6) SDG4Quality educa... (6) ခရီးသွားလုပ်ငန်း (6) မြို့ပြ အုပ်ချုပ်ရေ... (6) ဇီဝမျိုးကွဲများ (5) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (5) ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လု... (5)
dataset 389 ခု တွေ့သည်
နိုင်ငံ: mm None: dataset
မြန်မာ July 23, 2021 ရင်းမြစ်: ဝီကီပိဒိယ ... အဆင့်မြင့် ပညာရေး
ကမ္ဘောဒီးယား, မြန်မာ, ဗီယက်နမ် June 1, 2021 ရင်းမြစ်: Various sources of legal documents in country. သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် July 16, 2021 ရင်းမြစ်: Greater Mekong Subregion Atlas of the Environment (2nd Edition). ... လေဆိပ်များ နှင့် လေကြောင်းခရီးသွားခြင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် အထောက်အပံ့များ, အခြေခံအဆောက်အဦများ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် July 16, 2021 ရင်းမြစ်: Ocean Data Viewer (https://data.unep-wcmc.org/datasets/44) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
မြန်မာ July 16, 2021 ရင်းမြစ်: မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းအင်းသတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု ...
ဤအချက်အလက်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ပြသသည်။
၂၀၂၀တွင် မြန်မာနိုင်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုအုပ်စု၏ရာခိုင်နှုန်း
မြန်မာ July 16, 2021 ရင်းမြစ်: မြန်မာစာရင်းအင်းသတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုဌာန ... Poverty reduction
ဤအချက်အလက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀တွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုအုပ်စု၏ရာခိုင်နှုန်း ပြသသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ခွင့်ပြုထားသည့်မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
မြန်မာ July 9, 2021 ရင်းမြစ်: မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းအင်းသတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု ... ပြည်တွင်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ
ဤအချက်အလက်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြသသည်။ ယူနစ်အသုံးနုန်းမှာ ကျပ်သန်းနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ကြိုးမဲ့အင်တာနက် သိပ်သည်းမှု
မြန်မာ July 5, 2021 ရင်းမြစ်: မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းအင်းသတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု ... မိုဘိုင်းဖုန်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် အထောက်အပံ့များ, အင်တာနက်
ဒီဒေတာသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်လိုင်း ရရှိသောလူဦးရေကို ပြသသည်။
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် July 1, 2021 ရင်းမြစ်: စွမ်းအင်ဒေတာ ... လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း
Facebook နှင့်အခြားသူများနှင့်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ESMAP မှထုတ်လုပ်သည့် grid finder model မှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ညအလင်းရောင်၊လမ်းကွန်ရက်များနှင့်ရ...
မြန်မာ June 28, 2021 ရင်းမြစ်: မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းအင်းသတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု ... ငါး နှင့် ပင်လယ်စာများ, ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
ဤအချက်အလက်များသည်၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိမြန်မာနိုင်ငံတွင်ငါးနှင့်ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြသသည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။အဆိုပါယူနစ်မှာ Thousand Vissနှင့် တိုင်းတာသည်။
မြန်မာ June 23, 2021 ရင်းမြစ်: OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/) အုပ်ချုပ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် June 23, 2021 ရင်းမြစ်: Mekong Infrastructure Tracker ... ကျေးလက်ရေရရှိမှုနှင့် မိလ္လာရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းကိစ္စများဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ, စွမ်းအင်, ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး, အခြေခံအဆောက်အဦများ
မြန်မာ October 29, 2019 ရင်းမြစ်: Asian Development Bank/ Environment Operations Center ... မြစ်ချောင်းများ နှင့် ရေကန်များ
မြန်မာနိုင်ငံ၏မြစ်ကြောင်းစနစ်များကိုမြေပုံရေးဆွဲခြင်းအပေါ် ပထဝီဆိုင်ရာနေရာဒေသတစ်ခု- မြစ်နာမည်၊ မြစ်ဝှမ်းအမည်၊ မြစ်ဝှမ်းခွဲ အမည်၊ Strahler နံပါတ်
မြန်မာ November 5, 2019 ရင်းမြစ်: European Commission's [Global Surface Water ... စွမ်းအင်, ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု, ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ
ဆည် အမှတ်အသား dataset မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိသတ်မှတ်ထားသော ရေလှောင်တမံများ၏ အရွယ်အစားပြ layer (polygons)
ရန်ကုန် ဘတ်စ်ကား ဝန်ဆောင်မှု အချက်အလက်
မြန်မာ December 19, 2019 ရင်းမြစ်: http://data.yangonbus.com/Yangon Regional Transport Authority (YRTA) မြို့ပြ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် အထောက်အပံ့များ
မြန်မာ December 28, 2019 ရင်းမြစ်: https://energydata.info/dataset/myanmar-cities-and-town-location-wi ... လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ, လူဦးရေ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် မေ 28, 2021 ရင်းမြစ်: Lehner, B. and Döll, P. (2004): Development and validation ofa... ရေအရင်းအမြစ်များ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
မြန်မာ မေ 28, 2021 ရင်းမြစ်: The original data is from Ocean Data Viewer developed by UN ... ဇီဝမျိုးကွဲများ, ပင်လယ်ရေပိုင်နက် နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဧရိယာ
ဤ shape file သည် မြန်မာ့ပင်လယ်ရေပိုင်နက်နှင့်ကမ်းရိုးတမ်းဧရိယာကိုပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။ပင်လယ်ကျောက်ဆောင်ကြီးများသည် ပင်လယ်ရေပြင်အထက်အနည်းဆုံး ၁၀၀၀ မီတာမြင့်သော ကြီးမားသည့်ပင်လယ်မီး...
မြန်မာ December 28, 2019 ရင်းမြစ်: https://energydata.info/dataset/myanmar-existing-grid-medium-voltag ... လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးနိုင်ငံတော်အဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (NEP) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ၂၀၃၀ ခုနှစ်မတိုင်မီနိုင်ငံသားတိုင်း...
မြန်မာ မေ 18, 2021 ရင်းမြစ်: မြန်မာနိုင်ငံ၏စီမံကိန်းဘဏ် (https://projectbank.gov.mm/en/) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, လာဘ်စားမှုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး, အဓိက ကုမ္ပဏီများနှင့် စီမံကိန်းများ
မြန်မာနိုင်ငံ၏စီမံကိန်းဘဏ်သည် အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများကို သင့်လျော်သော ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာကာ ခန့်မှန်းရလွယ်ကူသောစနစ်တစ်...